बच्चाको स्वस्थ विकासका लागि ५ अत्यावश्यक पोषकतत्व – Health Post Nepal
२०७५ कार्तिक २० गते १०:३३
धेरै अभिभावकलाई बच्चालाई के खुवाउने तथा हुर्कने समयमा के अत्यावश्यक छ भन्नेमा दुविधा हुने गर्छ । बाल्यावस्था युवा तथा वृद्धावस्थाको आधार हो । सम्पूर्ण उमेर स्वस्थ रहन बाल्यावस्थामा केही पोषकतत्व अपरिहार्य हुन्छन् । बच्चाको सन्तुलित वृद्धि र विकासका लागि अत्यावश्यक ५ पोषकतत्वबारे जानिराखौँ–
१. भिटामिन ए
भिटामिन एले बालकको स्वस्थ विकासलाई सघाउँछ र रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ । बच्चाको खानामा भिटामिन एको सुनिश्चितता गर्न पहेँलो तथा सुन्तला रङका भेजिटेवल्स, जस्तैः जागर, बेलपेपर मिसाउन सक्नुहुन्छ । साथै, दूध, अण्डा र चिजमा पनि भिटामिन ए पाइन्छ ।
२. भिटामिन बी (विभिन्न)
स्वस्थ हड्डीका लागि क्याल्सियम अपरिहार्य छ । दूधजन्य पदार्थ, जस्तै ः दूध, दही, चिज र हरिया पात भएका भेजिटेबल क्याल्सियमका राम्रा स्रोत हुन् ।
बच्चाको हाड, मांसपेशी, छाला तथा रगत निर्माणमा प्रोटिनले सघाउँछ । मासु, बिन र अण्डा प्रोटिनका मुख्य स्रोत हुन् ।